Lacagta Lacagta Lacagta Lagu Sameeyo Talooyin Ku Saabsan Sidii Loo Joojin lahaa Ka Cabsashada Weerarrada Kalluumeysiga
Kalluumeysiga waxaa lagu qeexayaa habka nacaybka ah ee furaha ereyada iyo macluumaadka iyada oo loo marayo waddooyinka isgaarsiinta elektarooniga iyadoon aqoonta milkiilaha. Kalluumaysiga ayaa jirey qiyaastii labaatan sano, laakiin waa la yaab leh, dadku wali waa dhibbanaha.
Oliver King, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semt Adeegga Dijital ah, wuxuu la wadaagayaa waayo-aragnimadiisa ku saabsan sida aad uga ilaalin lahayd phishing.
Bishii Juun 2013, Kaspersky Lab, shirkad ammaan ah ayaa lagu qiyaasey in qiyaastii 37.3 milyan oo qof ay ku dhaceen dhibanayaasha weerarrada phaaliska ee sannadkii hore - keila rehvikeskus. Waxaa ka mid ah kuwa ay saameeyeen 1 milyan oo muwaadiniin UK ah Sida laga soo xigtay Symantec, waxqabadyada phishing ayaa sannadkii 2013 waxay u qaybiyeen 392 emails maalin kasta.
Sifooyinka Spam ee loo adeegsado bixiyayaasha websaydhka iyo shirkadaha ayaa muhiim u ah ka hortagga weerarada phishing. Laakiin, haddii qaar ka mid ah ay u helaan habka ay u socdaan sanduuqa boostada, waxay qaadi karaan tallaabooyinka soo socda si loo hubiyo inaadan ku dhicin dhibane.
Haddii ay u muuqato shaki, waxay u badan tahay inay khalad tahay
Kiisaska intooda badan, phishing ayaa badanaa u muuqda inay yihiin kalluun. Noocyada calaamaduhu waa calaamado wanaagsan oo muujinaya in email aan sharci ahayn. Ilaaliyaha ayaa laga yaabaa inuu ka soo horjeedo dhibkan, laakiin haddii bangigaagu kuu soo diro email, tayaduhu waa calanka cas.
U fiirso cinwaanka emailka
Haddii aad si joogto ah u hesho emayl shirkad ah, inta badan kiisku wuxuu isticmaalaa cinwaan isku mid ah. Markaad email ka hesho cinwaanada kale ee cusub, waa inaad ka walwashaa.
Ka taxaddar xaashida waqtiyada deg dega ah iyo hanjabaadaha
Mararka qaarkood, shirkado si fiican u dhisan ayaa kugula qasbay inaad si deg deg ah u fuliso hawsha. Tusaale ahaan, eBay waxaa waajib ku lahaa in ay macaamiisheeda ka codsadaan in ay si deg deg ah u bedelaan ereyada sirta ah ee ka soo baxa weerarka internetka.
U diyaari barashooyinka aan qaaska ahayn
PayPal, Amazon, bangiga, iwm mar kasta oo ay kuu soo diraan email, waa inay ku bilaabaan magacaaga. Taas bedelkeeda, khariidad u diraysa farriimo farriimo ah ayaa ku guuldareysatay inay tan samayso. Tani waa sababta ay emails uga soo iibsadeen shirkado sumcad leh oo kuugu magacaawaya tusaale ahaan, "Gacaliye Yooxanaa".
Iska ilaali foomamka xiran
Haddii aad hesho email ah foomka ku-xidhan oo kaa codsanaya inaad buuxiso xogta shakhsi ahaaneed sida faahfaahinta login iyo dib-u-celinta aqoonsiga, ha sameyn. Mucjisooyinka ugu caansan marnaba ma sameyn doonaan sida codsi adoo isticmaalaya email.
Isku day in aad isku xirto bogagga iyo nambarada telefoonka
Haddii e-mail ay ku weydiisto inaad wacdo lambarka oo aad siiso aqoonsi shakhsiyeed adoo adeegsanaya telefoonka, iskuday inaad hesho macluumaad rasmi ah shaqaalaha shirkada oo isticmaal inta lakala xisaabinayo ururka. Haddii lagaa rabo in aad furto xiriirka u muuqda inuu yahay mid sharci ah, u gudba calaamaddaada si aad u ogaato haddii laguu wareejiyey bog kale.
Ka taxadar ficilka kaluumeysiga
Talo-bixintan waxay haysaa weerarrada khatarta ah ee fariinta email-ka ah ee loo adeegsado weerarrada dad tiro badan oo rajo leh oo rajo leh in jajab weyni uu ku dhici doono dhibane.
Qalabka feyladda waa nooc weerar ah oo loo yaqaan '' Client Honor '' emailka ayaa laga yaabaa inuu kuu sheego magacaaga dhabta ah ama tixraac macaamil ah oo aad samaysay oo kaliya.
Ha la xiriirin phishing eeyga kaliya
Weerarrada kalluumeysigu waxay ku xiran yihiin emailka, laakiin waxay ku dhacaan siyaabo kale duwan. Website-yada been abuurka ah iyo codsiyada fariimaha deg dega ah ayaa ah qaar ka mid ah wadiiqooyinka kale kuwaas oo loo maro weeraro phishing ah.